Ukuzizwela Ukunakekelwa Ngokucophelela NguuNkulunkulu KoMuntu Esinda Kwinhlekelele | IVANGELI LOKUFIKA KOMBUSO
Emva kwale mvula enzima, umyeni wami,umamezala wami kanye nozakwethu nabo bakholwa wuNkulunkulu, futhi ngambonga uNkulunkulu ngokusindiswa kwabo. Ngalesi sehlo ngaqonda ngeqiniso ukuba uNkulunkulu wehlisa izinhlekelele ukuba angabhubhisi isintu kodwa ukuzokwenza insindiso yaso. Ngakolunye uhlangothi, uyasivusa thina, bantwana bakhe abayizimpumputhe kanye nabahlubukile abakholwa Wuye bebe benhliziyo ziyisigamu futhi bamkhohlise futhi bamhlubuke Yena. Ngakolunye uhlangothi, kakhulu kungukusindisa yonke imiphefumulo empofu eyayinge Yakhe phambilini kodwa esaphila ngaphansi kombuso kaSathane. Le nqubo yensindiso iqukethe ukunakekelwa ngokucophelela nguNkulunkulu. Njengoba amazwi kaNkulunkulu esho:“Namuhla, angehleli nje kuphela esizweni sikadrako omkhulu obomvu, ngiphinde ngiphendulele ubuso Bami kwizulu nomhlaba jikelele, ukuze izulu nomhlaba kuthuthumele. Ingabe ikhona indawo engakutholi ukwahlulela Kwami? Ingabe ikhona indawo engenazo izishayo engizehlisele phansi? Yonke indawo engiya kuyo ngiye ngasakaza “izimbewu zenhlekelele” zalo lonke uhlobo. Lena ngenye yezindlela engisebenza ngazo, futhi ngokungangabazeki iyisenzo sokusindiswa kwabantu, futhi engibanikeza kona kusawuhlobo oluthile lothando. Ngifisa ukwenza abantu abaningi kakhulu ukuba bangazi, bakwazi ukungibona, futhi ngaleyo ndlela bakwazi ukuhlonipha uNkulunkulu abangakaze bambone iminyaka eminingi, kodwa ongokoqobo namuhla” (Izwi Leshumi ku Amazwi KaNkulunkulu Aya Emhlabeni Uwonkana kuIzwi Livela Lisenyameni). Angikwazi ukusiza ngaphandle kokunikela udumo lwami kuNkulnkulu futhi: “O Nkulunkulu, uthando Lwakho luyiqiniso, ngoba sengibonile ukuthi noma ungenzani konke kuwukuzosisindisa. Manje ngiyakwazisa ukuba nguSomandla nobuhlakani Bakho, futhi ngibona nothando Lwakho, nensindiso Yakho kanti futhi ngokucacile izinhloso zakho zokulangazela. Angisakwazi ukungabi nandaba nokungabongi. Ngifisa kuphela ukunikela ngako konke engiyikho ukuze ngiqhubezele ivangeli lombuso Wakho, ukubuyisela imiphefumulo eminingi elahlekile emndenini Wakho, kanti futhi ngale ndlela nginikele inhliziyo yami ngokuzimisela Kuwe ukuze ngizuze uthando Lwakho!”
Okwedlule：Uthando LukaNkulunkulu Lungokoqobo Impela
Okulandelayo：Ngesikhathi Sesigameko Ngabona Ukuvikela KukaNkulunkulu